Ekwentị Huawei ga-akwụsị ịnwe mmelite gam akporo | Gam akporosis
Google ga-akwụsị ịhapụ mmelite gam akporo maka ekwentị Huawei
N’oge awa ole na ole gara aga, ekpughere na Donald Trump na-achọ ịbịanye aka n’otu iwu ga-egbochi ire Huawei ekwentị na United States, na ị nwere ike ịgụ na njikọ a. Akara ndị China kwuru na ọ naghị echegbu ya gbasara etu a, n'ihi ọnụnọ ya dị na ahịa ndị America. Ọ bụ ezie na ọ dị ka nsonaazụ ụlọ ọrụ nwere ike ịka njọ. Dị ka Google na akwado iji kwusi igba mhu maka ekwentị ha.
N'ihi iwu a, ekwentị Huawei ga tufuo ozugbo nweta sistemụ mmelite. Tụkwasị na nke ahụ, ekwentị ndị ọzọ nke ika ahụ na-amalite na ahịa, agaghị enwe Storelọ Ahịa Play ma ọ bụ ngwa Google ndị ọzọ, dị ka Gmail. .B.Ee, ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na United States na-akọ akụkọ.
Huawei ga-adị njikere maka ọnọdụ a, n'ihi na anyị amatala ọnwa ole na ole ụlọ ọrụ akwadebela sistemụ arụmọrụ gị. Ọ bụ ezie na mkpebi a nke Google ọ bụ nnukwu nsogbu maka akara ndị China. Ọzọkwa, iwu ahụ nwekwara ike ịpụta na ụlọ ọrụ ndị America agaghị ere ihe ọ bụla na ụlọ ọrụ China.
Ọnọdụ nke na-echetara anyị otu ZTE nwetara afọ gara aga, nakwa na ọ na-aga n'ihu iyi egwu na ọ ga-eme, n'ihi na Donald Trump emeworị ka o doo anya n'oge ụfọdụ na chọrọ igbochi ahịa nke ụlọ ọrụ abụọ a na America. Ihe dị ugbu a na iwu ọhụrụ a nke doro anya na ọ nwere ọtụtụ nsonaazụ.
Maka ugbu a anyị enweghị mmeghachi omume site na Huawei na mkpebi Google a nwere ike ime. Google n'onwe ya ekwenyeghikwa na akuko a. N'oge a enwere akụkọ dị iche iche sitere na mgbasa ozi America nke na-egosi ọnọdụ a. Ya mere, anyi aghaghi ichere rue otutu amara ihe banyere ihe a.
A ga-amanye Huawei iji sistemụ arụmọrụ ya. Ma ọ bụ enwere ike n'ime ọnwa ole na ole ọnọdụ ahụ ga-alaghachi jụụ. Ihe ọ bụla na-eme, esemokwu dị n'etiti China na United States na-arịwanye elu na ụdị omume ndị a. Anyị na-atụ anya mmeghachi omume site na ụlọ ọrụ n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Google ga-akwụsị ịhapụ mmelite gam akporo maka ekwentị Huawei
Lenovo Z6 Ntorobịa Na-abịarute Izu a: Foto nke mbụ na nkọwapụta nke gọọmentị
The 586 MP Sony IMX48 ga-abụ protagonist nke azụ foto modul nke Redmi K20